ကုမ္ပဏီပရိုဖိုင် - Tenpro Elec-Power သိပ္ပံ-Tech မှ LLC ။
TENPRO ELEC-ပါဝါ SCI-Tech LLC (တရုတ်) တက်ကြွနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အတူ High-နည်းပညာတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံခြားဖက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအစမတ်ဇယားကွက်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ရှေ့ဆောင်အဖြစ်အသိဉာဏ် terminal ကိုထုတ်ကုန်ဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်ကိုအလိုအလျောက်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒဿနအဖြစ် "အဓိက, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်ဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်ကိုပိုပြီးအသိဉာဏ်စေသည်အဖြစ်နည်းပညာနှင့်အတူ" နှင့်ကသုတေသီ, ဖွံ့ဖြိုး, ထုတ်လုပ်ကြာနှင့်အရောင်း။ အဆိုပါထုတ်ကုန် TF စီးရီး (လမ်းခွဲ terminal ကို) ၏အသိဉာဏ်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခြင်း switch ကို Controller, TD စီးရီး၏အသိဉာဏ်ဖြန့်ဖြူးအလိုအလျောက်ဘူတာရုံ terminal ကို, TT စီးရီး၏အသိဉာဏ်ဖြန့်ဖြူး terminal ကို, TM အလိုအလျောက်စီးရီး (system ကို), ဖြန့်ဖြူးအလိုအလျောက်မာစတာဘူတာရုံများနှင့်ဓာတ်အားခွဲရုံ၏အသိဉာဏ်ဖြန့်ဖြူးလိုင်းအဆင့်အတန်းမော်နီတာပါဝင်သည်နှင့် စသည်တို့ကိုအလတ်စားနှင့်မြင့်မားသောဗို့အားမူလတန်း switching အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများပြည့်စုံအစုံ, အဆိုပါကုမ္ပဏီအကြီးစားပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းများအနေဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအခွက်နှင့်ကျော်ကြားသောသိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနဌာန၏အုပ်စုတစုကိုစုဝေးစေခဲ့သည်။ "နည်းပညာအနာဂတ်အတွက်ဖန်တီး '၏အယူအဆအတွက်ကျနော်တို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်း, စက်မှုလုပ်ငန်းများရှေ့တန်းမှနှင့်အချိန်များတွင်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့အမြဲတစေစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်နည်းပညာအတွက်လျင်မြန်စွာအပြောင်းအလဲများကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နှင့်တီထွင်ခြင်းနှင့်လျှောက်ထားအသစ်သောထုတ်ကုန်များနှင့်နည်းပညာများနှင့်အရှင်ပါဝါစက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးပြုသူများအတွက်ပြည့်စုံပါဝါဂီယာ, ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အာဏာကိုအလိုအလျောက်စနစ်ကဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့ဆက်လက်။
အဆိုပါ TENPRO အမှတ်တံဆိပ်တရုတ်နှင့်ပင်အားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောနည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများပေးပါသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ကုမ္ပဏီစဉ်ဆက်မပြတ်အထူးသဖြင့်စမတ်ဇယားကွက် 10KV ဖြန့်ဖြူးအလိုအလျောက်၏လယ်ပြင်တွင်နည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆက်ကပ်အပ်နှံ, ထုတ်ကုန်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းနည်းပညာသုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်ပိုက်ဆံပမာဏကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ နီးပါး 1000 စတုရန်းမီတာဖုန်-အခမဲ့အီလက်ထရွန်းနစ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့်အတူအဆိုပါကုမ္ပဏီ, တွေ့ကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင် R & D အသင်း, မူပိုင်ခွင့်နည်းပညာလိုင်စင်နံပါတ်တစ်ပြည့်စုံ EMC (electrostatic မြန်ဆန်ယာယီ, တစ်ဟုန်ထိုး, etc) R & D ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုပြည့်စုံခြင်းနှင့်တင်းကျပ်သောထုတ်လုပ်မှုပိုင်ဆိုင် အရည်အသွေးမြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်အဆင့်မြင့်အလိုအလျောက်အထူးထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုစနစ်၏အုပ်စုတစု, တင်သွင်း Smt နေရာချထားစက်ကိရိယာများကိုချမှတ်, PCB ဘုတ်အဖွဲ့က high-အနိမ့်အပူချိန်အိုမင်း welding ပြီးနောက်များနှင့်ပြည့်စုံအစုံမြင့်မားသောအပူချိန်အိုမင်းကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်အားတရားစွဲဆို ဖြန့်ဖြူးအလိုအလျောက်များအတွက်တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော telesignalization နှင့်ပေးပို့စနစ်များ / telesignalization, ပေးပို့စနစ်များနှင့် telecontrol လမ်းခွဲဆိပ်ကမ်း (TF) အမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်ထုတ်ကုန်, ဘူတာရုံ terminal ကို (TD), ဖြန့်ဖြူး terminal ကို (TT) နှင့်လိုင်းအဆင့်အတန်းမော်နီတာ (TM) ၏နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ပံ့ မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတန်ဖိုးအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူဖောက်သည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီကျွမ်းကျင်ခြင်းနှင့် 10KV ဖြန့်ဖြူးအလိုအလျောက်၏လယ်ပြင်တွင်အများအပြားသော့နှင့်နည်းပညာသစ်များသိမ်းယူခဲ့သည်။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောကြားနေအခြေခံစနစ်များအောက်မှာအမှား detection နဲ့တရားစီရင်ရာနက်ရှိုင်းသောအသိပညာရှိပါတယ်, နှင့်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပအမှားပြဌာန်းခွင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ algorithm ကို demarcation ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအကြီးစား FPGA programming ကို applications များ, High-end က ARM, DSP နှင့်အခြား 32-bit နဲ့ပရိုဆက်ဆာမှ 8-bit နဲ့ Microcontroller တွေကနေပလီကေးရှင်းတတ်ကျွမ်းသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကြွယ်ဝတဲ့အတွေ့အကြုံကိုစုဆောင်းနှင့် system ဖှံ့ဖွိုးတိုးတပလက်ဖောင်း, DSP ဖှံ့ဖွိုးတိုးတပလက်ဖောင်းနှင့်စက်မှုတန်းထုတ်ကုန် EMC ဟာ့ဒ်ဝဲဒီဇိုင်း ucos, embedded Vxworks, Linux ၏မြင့်မားသောအဆင့်စောင့်ရှောက်။ လက်ရှိတွင်ကုမ္ပဏီကတီထွင်ထုတ်လုပ်ထုတ်ကုန်သည် 2014/2015 အမျိုးသားကွန်ယက်နယူးနျ Standard အထူးစမ်းသပ်ခြင်း, Two-လမ်းလျှို့ဝှက်ကုဒ်အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်စမ်းသပ်ခြင်း, အမျိုးသားကွန်ယက်နှင့်တောင်ကွန်ယက်လျှပ်စစ်စွမ်းအားအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားဝင်စမ်းသပ်လေပြီ ပရိုတိုကောကိုက်ညီစမ်းသပ်ခြင်း, EMC စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အခြားအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း IEC60870-5-101 သို့မဟုတ် 104, DPN3, modbus နှင့်အခြား protocol များကိုလိုက်နာရမည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီတရုတ်နိုင်ငံ၏ဖြန့်ဖြူးပါဝါစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပင်ကမ္ဘာပေါ်မှာနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေး, နှင့်အဆက်မပြတ်မွမ်းမံမှုများနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ထုတ်ကုန်များလမ်းကြောင်းသစ်အတူတက်တတ်၏။ အဆိုပါကားမောင်းအင်အားစုအဖြစ် "အဓိက, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်ဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်ကိုပိုပြီးအသိဉာဏ်စေသည်အဖြစ်နည်းပညာနှင့်အတူ" ဟုအဆိုပါကုမ္ပဏီအစဉ်အမြဲ၏စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်အောက်ပါအတိုင်း, ကိုယူပြီး "ကျွမ်းကျင်ပိုင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှု, ရိုးသားမှုပထမဦးဆုံး" နှင့် "အရည်အသွေးမြင့်လုပ်ငန်းရှင်သန်ရပ်တည်ရေး၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည်, သမာဓိရှိသည့်ဖြစ်ပါတယ် လက်ရှိအလိုအလျောက်နည်းပညာအပေါ် အခြေခံ. လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဘဝ, သိပ္ပံနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု၏မောင်းနှင်အားဖြစ်တယ်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုစျေးကွက်ဝေစု၏အာမခံချက်ဖြစ်တယ်, win-win "ဟုအဆိုပါလုပ်ငန်းများက လိုက်. ပန်းတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ယင်းကိုအားပေးအားမြှောက် ပိုမိုအားကောင်းနှင့်ပိုပြီးတည်ငြိမ်ဘေးကင်းပါဝါစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပထမဦးဆုံးနှင့်ဒုတိယပစ္စည်းကိရိယာများပေါင်းစည်းမှုနည်းပညာသုတေသနနှင့်စမတ်၏သဘောပေါက်ဖို့အထောက်အကူပြုရန်အကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာဖြန့်ဖြူးအလိုအလျောက်အသိဉာဏ် terminal ကိုထုတ်ကုန်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ရန်ကြိုးပမ်း, ဖြန့်ဖြူးတရုတ်နိုင်ငံတွင်ကွန်ယက်နှင့်ကမ္ဘာကြီးကို။ ဒါဟာအစပြည့်စုံ အသစ်ကစွမ်းအင်လယ်ပြင်နှင့်သုတေသနအတွက် Ly layout ကိုစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှု, ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုပလက်ဖောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့်အင်တာနက်မြှင့်တင်ရန်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ 2025 မဟာဗျူဟာမြောက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ဖို့အတွက်ကုမ္ပဏီအဆက်မပြတ်နည်းပညာမြင့်မှတဆင့်ချိုး, စဉ်ဆက်မပြတ်ဥာဏ် command ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းမှအထောက်အပံ့နှင့်ခိုင်ခံ့သောတိုင်းပြည်မဟာဗျူဟာထုတ်လုပ်ထဲမှာ "တရုတ်ကို 2025 ခုနှစ်စေ" ၏စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်သို့ "TENPRO" အောင်ကြိုးပမ်း။